Beginners များအတွက် Cryptocurrency ထရေးဒင်း Start ဖို့လှောင်ပြောင်ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန် - အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing
သငျသညျစတင်ရန်ခင်မှာသင်ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌အဘယ်ကြောင့်ကုန်သွယ်မှု cryptocurrencies အံ့သြစေခြင်းငှါ ...
တစ်ဦး cryptocurrency ကုန်သည်အဖြစ်စတင်အသုံးပြုခြင်း
1 ။ တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်
2 ။ တစ်ဦးကုန်သွယ်အကောင့်ကိုဖွင့်
3 ။ သင့်အကောင့် Loading
4 ။ cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန်ဘယ်လို
A. အဝယ်များနှင့် cryptocurrencies ရောင်း (ဝယ်ကိုင်)
ခ Cryptocurrency CFDs
အဘယ်ကြောင့်ကုန်သွယ်မှု cryptocurrency CFDs ... ?
cryptocurrencies နှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ် C. Binary options များ
အဘယ်ကြောင့်သင်ဤ cryptocurrency ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားပါသင့်သလဲ
Cryptocurrency binary options များအများအပြားအားနည်းချက်များရှိသည်။
5 ။ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုဆုတ်ခွာ
အရာ cryptocurrencies မှာကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်လက်ရှိ IQ Option... ?
သင်မှန်ယခု cryptocurrencies ကုန်သွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လေးအဓိကအကြောင်းရင်းများရှိနေပါသည်။
မှာအပူဆုံး Cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှု IQ Option
1. 2017 ၏ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသော cryptocurrencies ၏စုစုပေါင်းအဘိုးပြတ် $ 100 ဘီလီယံအထိစံချိန်သိရသည်။ အသစ်က Crypto စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားသူတွေကို၏တန်ဖိုးမြင့်တက်ဆက်လက်နောက်တစ်နေ့5နှစ်အတွင်း cryptocurrency စျေးကွက်ထုပ်စဉ်းစားပါ။ နေကြသည်အဖြစ်
2 ။ ပိုများသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း Fiat (ပုံမှန်) ငွေကြေးတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအဖြစ် cryptocurrencies ချမှတ်ထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ကအနိမ့်ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေနှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာစက္ကန့်အတွင်းပြီးစီးနေကြသည်ကိုဆွဲဆောင်, လုံခြုံထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cryptocurrencies ဖန်တီးခြင်းနှင့် ICO ကနေတစ်ဆင့်သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ သင်၌မဝယ်နိုင်နေနှင့် cryptocurrency တန်ဖိုးကိုတိုးလျှင်သင်တစ်ဦးစမတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
3 ။ ကနေရှေးခယျြဖို့ cryptocurrencies ရာပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ ဖြန့်ချိလျက်ရှိသူတို့၏အမျိုးအအများစုလျင်မြန်စွာစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ကြုံနေရ အများပြည်သူဖြန့်ချိခံရလအတွင်း။
cryptocurrencies အပြင်ကုမ္ပဏီများသည်အသစ်သောနည်းပညာထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရန် blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြု. ရသည်။ ဒီနည်းပညာကိုအနှစ်ရဲ့နောက်စုံတွဲတစ်တွဲကိုကျော်မွေးစားခံရဆက်လက်ဖွယ်ရှိကြောင်းပြသထားတယ်။
4 ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ cryptocurrencies Ultra-မတည်ငြိမ်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဇွန်လ 24 2017, Etherum ၏တန်ဖိုးအပေါ် 319 ဆင့်မှ $ 10 ထံမှပျက်ကျသွားသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတိုနေထိုင်ခဲ့ခဲ့ တန်ဖိုး ... နာရီအနည်းငယ်အတွင်းပြန်ကောင်းလာကြောင်း။
တစ်ပါးရည်နပ်ရည်ကုန်သည်ဖြစ်လာ၏ပြောရဲ့ရန်အရင်ကဆိုရင်လမ်းညွှန်ရပါစေ cryptocurrency ကုန်သွယ်.
ထရေးဒင်း cryptocurrencies ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း Forex ကုန်သွယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်စတင်အလားတူခြေလှမ်းတွေကိုယူပြီးပါဝငျသညျ။
ပုံမှန်ငွေကြေးဘဏ်ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ Cryptocurrencies သူတို့ဆော့ဖျဝဲနေဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သူတို့တစ်တွေ "ပိုက်ဆံအိတ်" အဖြစ်ရည်ညွှန်းဘာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ပါတယ်။
ဒါက blockchain တခုတခုအပေါ်မှာလိပ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံအိတ် apps များ, အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်, ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်နှင့်စက္ကူပိုက်ဆံအိတ်ပါဝင်သည်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပိုက်ဆံအိတ်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသော့ချက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ public key ကိုသီးခြားစွာသင်၏ PayPal အီးမေးလိပ်စာဆင်တူသငျသညျပိုက်ဆံအိတ်သတ်မှတ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုပါ private key ကို password တစ်ခုနှင့်ဆင်တူသည်။
သငျသညျအမှန်တကယ် cryptocurrencies အတွက်ကုန်သွယ်မှုရည်ရွယ်ပါလျှင်တစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လှစ်သာလိုအပ်ပေသည်။
IQ Option ပိုကောင်းတဲ့နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အစားထိုးကမ်းလှမ်း အဆိုပါဖွင့်ပါထရေးဒင်းကွန်ယက်ပလက်ဖောင်း (OTN) မှတဆင့်။ ဤသည် cryptocurrencies အာရုံစိုက်ရဲ့ဖြန့်ကျတ်လဲလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရှိသမျှကို cryptocurrencies သိုလှောင်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော blockchains ဖြတ်ပြီးအရောင်းအထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
နယူး IQ Option အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူယခုအချိန်ကန့်သတ်ငွေပမာဏကိုအခမဲ့ OTN တိုကင်ရတဲ့နေကြသည်။
သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကဲ့သို့သောတဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားနှင့်အတူအဖွင့်တဦးတည်းအကြံပြုမယ်လို့ IQ Option cryptocurrencies ကုန်သွယ်ကမ်းလှမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးလဲလှယ်။
ငါသည်လည်းသင်နှစ်သက်တဲ့ပွဲစားတစ်ဦးသရုပ်ပြအကောင့်ရှိပြီးအကြံပြုလိမ့်မယ်။ IQ Option တစ်ဦး $ 10000 ကို virtual ငွေသိုက်နှင့်အတူတစျခုပေးထားပါတယ်။ အစပြုသူကုန်သည်များကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာစမ်းချင်သည့်အခါ Demo အကောင့်နေရာလေးကိုအတွက်လာ။
ယနေ့ရရှိနိုင် cryptocurrencies ရာပေါင်းများစွာစာသားရှိပါတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးသူတွေကိုအနည်းဆုံး5ကမ်းလှမ်းတဲ့ပွဲစားကိုရှာတွေ့လိုအပ်ပေသည်။
ဒါဟာငွေကြေးအလားတူပါပဲ။ တစ်ဦး cryptocurrency ရေပန်းစားသည်သောအခါ, ကုန်သည်များကရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးပါတယ်။ သို့ဖြစ်. နီးပါးသင်တစ်ဦးကုန်သည်အဖြစ်အောင်မြင်မှုရလိုလျှင်လိုအပ်သောနေသောကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအာမခံပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အတော်ကြာ cryptocurrencies ထားရှိခြင်းသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရန်သင့်အားချချည်နှောင်မထားဘူး။ တဦးတည်း cryptocurrency ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကြီးမပါရှိလျှင်သင်သည်အခြားများတွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လဲလှယ်ပေါ် မူတည်. သငျသညျနညျးလမျးမြား၏နံပါတ်၌သင်တို့၏ကုန်သွယ်အကောင့် load နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားခရက်ဒစ်ကဒ်, ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် eWallet ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လဲလှယ်ပေါ် မူတည်. သင်လုပ်နိုင်သည် cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ရန် သုံးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကတဆင့်။
ဒါကအစပြုသူနှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကြံပြု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကုန်သွယ် Forex အလားတူပါပဲ။ သင်က cryptocurrency ဝယ်ဖို့နှင့်၎င်း၏တန်ဖိုးကိုမြင့်တက်နေချိန်တွင်အနေအထားကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။
တန်ဖိုးကိုသင်ပြန့်ပွား / ကော်မရှင်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးအမြတ်အစွန်းစေတဲ့အချက်မှထသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ထို့နောက်သင်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးမှာအခါနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့, သင်သည်သင်၏ cryptocurrency ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းသည်နောက်တဖန်မဝယ်ခင်တစ်ဦးအချို့သောအချက်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်သည်အထိထို့နောက်စောင့်ပါ။
ဤနည်းဗျူဟာ y ကအကြံပြုသလဲ?
cryptocurrencies ၏မတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာသေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေကနေအကျိုးဖြစ်နိုင်စေသည်။ ဇွန်လ 24 Etherum ပျက်ကျမှုကိုသတိရပါနှင့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းပြန်ခုန်ထွက်?
ဒါဟာသင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်အောက်ပါပါပြီအထူးသဖြင့်ပါလျှင်တစ်ဦးကောင်းရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာပါပဲ။ သူတို့လူသိရှင်ကြားကုန်သွယ်ခံစတင်ခဲ့ကတည်းကယနေ့ရရှိနိုင်သောလူကြိုက်များ cryptocurrencies အတော်များများဟာတစ်ဦးအထက်သို့လမ်းကြောင်းသစ်မြင်ကြပြီ။
cryptocurrency ဝယ်ယူမှုအောင်မမြှောက်ကိန်းရှိပါသည်။ ဒါဟာခက်ခဲသည့် cryptocurrency purchasing အခါသင်အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံင့်ထက်ပိုပြီးဆုံးရှုံးဖို့စေသည်။
ပြန့်ပွားများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ ဒါကဈေးကွက်ကယ့်ကိုမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲမဟုတ်လျှင်က hard အတော်လေးတိုတောင်းသောကာလအဘို့အနေအထားကျင်းပရန်စေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုန်သွယ်မှု entry ကိုမြို့တော်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ Bitcoin ကဲ့သို့အခြို့သော Crypto ၏တန်ဖိုးအကြွေစေ့နှုန်း $ 5000 ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်။
သင်တို့ရှေ့မှ CFDs ကုန်သွယ်င့်ဆိုပါက, cryptocurrency CFDs အလားတူထုံးစံ၌အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အစား cryptocurrency ဝယ်ယူခြင်း, သင့်ရဲ့အလုပ်က၎င်း၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်မှနျးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးကိုသင်ရွှေ့ဖို့ crypto ၏စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဝယ်ယူစျေးနှုန်းမြင့်မားသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးထဲကနေနောက်ထပ် (ဖြစ်စေအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) စျေးနှုန်းရွေ့လျားအဖြစ်။
ပထမဦးစွာ, သင်သည်သင်၏ cryptocurrency တိုကင်သိမ်းထားဖို့ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကသင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေအမှန်တကယ် cryptocurrency ရောင်းမဝယ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
ပွဲစားများများသောအားဖြင့်အမှန်တကယ် Crypto ဝယ်ယူရောင်းချခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ cryptocurrency CFDs အပေါ်သေးငယ်န့်ထားပါ။ အောက်ပိုင်းန်လွယ်ကူအချိန်တိုငွေပမာဏအတွင်းအမှုနဲ့အရောင်းအဝင်နှင့်အထွက်မှစေသည်။
ပွဲစားမှာလည်းများသောအားဖြင့်ကုန်သည်များမှသြဇာ (တိုးပွားစေ) ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုသိသိသာသာသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းများပြားဖို့ခွင့်ပြုသည့်ချေးငွေ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။
အများအပြားစညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားများနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှုကွာ binary / ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာကနေပြောင်းရွှေ့နေကြသော်လည်း, ကန့် cryptocurrency အရင်ကဆိုရင်အဘို့အသေးအလားအလာမဟာဗျူဟာ။ ဤနည်းဗျူဟာအတွက်ဖျောပွနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ချဉ်းကပ်ကြာပါတယ်။
ယခင်နှစ်ဦးကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူ, သင့်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးကုန်သွယ်မှုထွက်ပေါက်မှာကုန်သွယ်မှု entry ကိုများနှင့်စျေးနှုန်းမှာစျေးနှုန်းအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်တွက်ချက်သည်။ binary options များနှင့်အတူ, သင့်အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်အရှုံးပုံသေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကသင်ရွှေ့ဖို့နောက်ခံတူရိယာ၏စျေးနှုန်းမှနျးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေါ် မူတည်. တစ် fixed ငွေပမာဏဝင်ငွေသွားကြသည်ဖြစ်ပါသည်။
Etherum ၏စျေးနှုန်းကိုနောက် 100 စက္ကန့်အတွင်းမြင့်တက်လျှင်သင် $ 60 လက်ခံရရှိရန်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သင်ကမသက်ဆိုင်စျေးနှုန်း $ 1 သို့မဟုတ် $ 300 ပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိ၏ရလိမ့်မယ်ယျ။ စျေးနှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျစတင်ရန်တစ် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ binary options များကုန်သွယ်ငျသညျဤအမှု၌ Bitcoin တန်ဖိုးရှိ $ 5000 ဖြစ်စေခြင်းငှါအရာနောက်ခံတူရိယာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမလိုအပ်ပါဘူး။
သင်သည်တာရှည်ရာထူးကိုင်ချင်ကြဘူးလျှင်အကောင်းတစ်ဦး option ကိုပါပဲ။ အဆိုပါအရောင်းအထဲကတချို့ဟာ 15 စက္ကန့်ကဲ့သို့အတိုစေနိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအားနည်းချက်အများအပြားအားပြိုင်မှု binary options များကုန်သွယ်ထိန်းညှိဖို့ခက်ခဲတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိတ်ဆက်ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အတော်များများကပွဲစားများ CFDs ၏မျက်နှာသာ၌ဤဈေးကွက်မထွက်နေကြသည်။
ဤသည်သို့သော်သင်သည် cryptocurrency binary options များရာပူဇော်သက္ကာကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပွဲစားကိုမတှေ့နိုငျဟုမဆိုလိုပါ ...
နောက်ထပ်အားနည်းချက်သင်သည်ဝင်ငွေမှမတ်တပ်ရပ်သည့်အမြတ်အစွန်း fixed ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မခွဲခြားဘဲဘယ်လိုမြင့် cryptocurrency ရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ cryptocurrency ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအကြီးအကျယ်ကွပ်မျက်မြန်နှုန်းအပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်း၏ထို့ကြောင့်မပေးကောင်းတစ်ဦးရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု option ကို။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို, သင့် cryptocurrency ကုန်သွယ်င်ငွေဆုတ်ခွာလာသောအခါမြှုတ်အချိန်နှင့်အခကြေးငွေအကြီးအကျယ်သင့်ရဲ့အကျိုးဆောင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျ (CFD နှင့် binary options များကုန်သည်များသည်များအတွက်) ငွေသားအဖြစ်နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်မှ cryptocurrency အဖြစ်ဝင်ငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။
အခုဆိုရင်သင်ဤ cryptocurrency ကုန်သွယ်လမ်းညွှန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများကတဆင့်သွားပြီသွားပါပြီ,
ဤသည်လူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2009 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်စုစုပေါင်း cryptocurrency ဈေးကွက်အရင်းအနှီး၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 46% ပါဝငျခဲ့သညျ။ ဒါဟာအစတစျခုနှငျ့တစျေးအကြီးဆုံးင် Bitcoin ကျော် $ 5000 ဘို့မယ်။
ဒါဟာသြဂုတ်လ 2017 အတွက်ဖြန့်ချိအသစ်များကို cryptocurrencies တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏လူကြိုက်များအကြီးအကျယ်ယင်း၏ပစ်လွှတ်သည့်အချိန်တွင် Bitcoin ပိုင်ရှင်တွေ Bitcoin ငွေဒင်္ဂါးပြားတစ်ခုတန်းတူငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိသည့်အချက်ကိုမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။
2014 အတွက်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက Dash လူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrencies တဦးသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်, က၎င်း၏အမည်ကိုနှစ်ကြိမ် (Darkcoin ပြီးတော့ XCoin) ပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ၎င်း၏လူကြိုက်များင်း၏လက်ငင်းအရောင်းအ, ကျတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် Bitcoin ကျော်အဓိကတိုးတက်မှုနေသောပုဂ္ဂလိကအရောင်းအထဲကနေကိုအဓိကအားထား။
ဒါကဈေးကွက်တွင်ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးကအင်္ဂါရပ်တွေကိုယနေ့ရရှိနိုင်သောထိပ်တန်း5cryptocurrencies မှ Etherum ကျု့ံကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။
ပထမဦးဆုံးအရောင်းအစိတ်မချရအေးဂျင့်များအကြားထွက်သယ်ဆောင်ကြသောအခါအထူးသဖြင့်အပိုဆောင်းလုံခြုံရေးပေးထားတဲ့စမတ်စာချုပ်များသည်။ ဒုတိယ Bitcoin နှိုင်းယှဉ်ပိုမြန်ငွေပေးငွေယူမြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Bitcoin ငွေဆင်တူ, Etherum ဂန္ထဝင် Etherum ၏အောင်မြင်မှုကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်ဦး Bitcoin အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်တီထွင်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံး "Altcoins" ၏တဦးတည်း, Litecoin ပိုမြန်အရောင်းအအတည်ပြုချက်ကိုလုနီးပါးသုညငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ပေးထားပါတယ်။
ဂယက်ထ, ဘေးကင်းဖြစ်ဂုဏ်ယူစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့် Bitcoin နှင့် Etherum နှိုင်းယှဉ်ပိုမြန်အရောင်းအပေးထားပါတယ်။ ဈေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့် ပတ်သက်. ကတတိယအကြီးဆုံးပါပဲ။
ဤသည်မှာအထူးအရာကအင်တာနက်များအတွက် optimized ပေါ့ပါး cryptocurrency ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအရှစ်အခြား cryptocurrencies အပြင်ကိုသင်မှာရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင် IQ Option ZCash, Monero, Santiment နှင့် OmiseGo ဖြစ်ကြသည်။
Cryptocurrencies မျှသံသယကမ္ဘာကြီးကိုဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်အတွက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နယူး cryptocurrencies နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin နှင့် Etherum အဖြစ်အချို့သောဈေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့်လူကြိုက်များမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဟဲဗီးဝိတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦး cryptocurrency ကုန်သည်အဖြစ်, သင်သည်သူတို့၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ စတင်ရယူခြင်းရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်များကပါဝင်ပတ်သက် အွန်လိုင်း FX သို့မဟုတ် CFD ကုန်သွယ်။
cryptocurrency ကုန်သွယ်၏အလားအလာအမြတ်အစွန်းအပြင်ကပွဲစားနှင့်ကူးလူးဖလှယ်မှု binary options များအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဤဈေးကွက်သို့ကြည့်မျှော်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာသင့်ရဲ့ cryptocurrency ကုန်သွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နှင့်အခြားကုန်သည်များအတွက် join မတိုင်မီညာဘက်ကိုစတငျဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်, Bitcoin, ငွေသား Bitcoin, စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း Bitcoin, etherum ဂန္ဝယ်ဖို့, litecoin ဝယ်ဖို့, cryptocurrency, cryptocurrency လဲလှယ်, cryptocurrency စျေးကွက်, cryptocurrency စျေးနှုန်းများ, etherum ဂန္, etherum ဂန္ပိုက်ဆံအိတ်, cryptocurrency ဝယ်ဖို့မည်သို့, iota ဝယ်ဖို့မည်သို့, ဂယက်ထမဝယ်ဖို့ဘယ်လို, Bitcoin ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်မည်သို့, iota, iota အကြွေစေ့, iota ပိုက်ဆံအိတ်, etherum ဂန္ကောင်းတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါသည်, litecoin, ငွေသား litecoin, တန်ဖိုးအား litecoin, ပိုက်ဆံအိတ် litecoin, ဂယက်ထ cryptocurrency, ဂယက်ထစျေးနှုန်း, ဂယက်ထစတော့ရှယ်ယာ, ဂယက်ထပိုက်ဆံအိတ်, အဘယ်အရာကို Bitcoin ဖြစ်ပါတယ်, cryptocurrency ဘာလဲ, ဂယက်ထကဘာလဲ